AJIO Online Shopping အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.3 | 50,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（17.4MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် AJIO Online Shopping - Handpicked Curated Fashion
India နှင့် World တို့မှအပြင်းအထန်လတ်ဆတ်ဆုံး, လတ်ဆတ်ဆုံးနှင့်ထူးခြားသည့်စတိုင်များနှင့်အတူ
Ajio.com တွင်အမှတ်တံဆိပ် 2000 ကျော်နှင့်တံဆိပ်များနှင့်တံဆိပ်များနှင့်တံဆိပ်များကိုစတိုင်လ်ကိုကြည့်ရှုရန်သေချာစေရန်ပုံစံ 4,00,000 ကျော်ပါ0င်သည်။ အမျိုးသမီးများ, အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများ, ဖိနပ်သို့မဟုတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်အဝတ်အစားအတွက်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်း? အထူးလျှော့စျေးများကို 70% အထိလျှော့စျေးများကိုခံစားပါ, အအေးဆုံးစတိုင်များပေါ်တွင်ကြီးမားသောအပေးအယူများနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကမ်းလှမ်းချက်များ။
- အမျိုးသားများ, အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအတွက်အထူးသီးသန့်ထုတ်ကုန်များ, အထူးသီးသန့်ထုတ်ကုန်များ, အထူးလျှော့စျေးများနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းများ။ စျေး0ယ်ရန်ရောင်းရန်သင်မစောင့်နိုင်ပါ။
- Ajio.com ၏စုဆောင်းမှုသည်နေ့တိုင်းအပူခံဆုံးသောအသစ်များနှင့်အတူနေ့တိုင်းလန်းဆန်းစေပြီးနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှနောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်းများကိုဆောင်ခဲ့သည်။
- ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းတွင်ရှိသော0တ်စုံစုံသော0တ်စုံများကိုတခြားနေရာများတွင်မတွေ့ရသောအထူးသီးသန့်အိတ်ခ်ျအိုင်စီသည်အခြားနေရာများတွင်မတွေ့ရှိနိုင်သည့်အထူးသီးသန့်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုနှင့် Unryban အမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက်ရဲရင့်သောလမ်းပေါ်ဖက်ရှင်ဖြစ်သည်။
- ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့် indie style collections များဖြစ်သော Creatie Myanmar Collection Collection မှတစ်ဆင့်ဒေသန္တရအိန္ဒိယ၏အနုပညာရှင်များနှင့်လက်ရာ0န်ထမ်းဆောင်ခြင်းအားဖြင့် #VocalForlocal ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူသည်။
Delivery တွင် Delivery တွင် Dount On Doad Dourstep သည် 14,000+ ပင် pin codes များ, နေ့ 30,000 ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်ဖလှယ်ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းပြန်အမ်းငွေ အွန်လိုင်းပိုက်ဆံအိတ်များနှင့်အွန်လိုင်းပိုက်ဆံအိတ်များကိုအွန်လိုင်းအသုံးပြုပါ။
Ajio - Ajio - ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်မှီ - ငါတို့၏ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်သင်ပိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏ခေတ်မှီပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်။ တစ် ဦး -of-a-manning သောခေါင်းကိုလှည့်စတိုင်များကိုရှာဖွေနေပါသလား။ Ajio သည်သင်သိုလှောင်ထားသင့်သောအရာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Indie Styles များသည်စာသားအတိုင်းသင်ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ ဂရုတစိုက်လက်ကိုင်ကိုင်ထားခြင်း, တစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်။ ထူးခြားသောနှင့်လက်ဆွဲနိုင်သောအပိုင်းအစများသာလျှင်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ Arlisans တို့က #madeinindia ကိုဖြတ်တောက်သည်။ #VocalForlocal ကိုသွားပြီးဘောင်းဘီတိုများ, Kurtas, angrings များ, နားပြားများ, လက်ဝတ်ရတနာများ, ဖိနပ်များ, ဖိနပ်များ, Dupattas, Dupattas, Dupattas, Dupattas,
ရာသီဥတုအခြေအနေတွင်0င်ရောက်နေသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေတ်ရေစီးကြောင်းများမှ0င်ရောက်မှုများအနေဖြင့်သင့်အား HIT စာရင်းတွင်ထည့်ရန်အာမခံထားသူများကိုသာအကြံပြုပါသည်။
Global အမျိုးသားများ, အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်
Men: Lee, Levi, Pepe, Pepe, Rebook, Puma, Adidas, Gap, Gap, Superdry, Gap, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Gap, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Superdry, Gap > အမျိုးသမီးများ - W, Biba, Baggit, Steve Madden, Soch, Global Desi, Aurelia, Aurelia, Melange & Jony, Peppermint, Peppermint, UCB ကလေးများနှင့်ပို
လည်းစာရင်းအပေါ်ရယူပါ။ သင်၏ Ajio.com ထုတ်ကုန်ကို0တ်ဆင်ပြီး @Ajiolife ပေါ်တွင်တင်ပါ။
Ajiffer.com ၏အွန်လိုင်းစျေးဝယ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုယခုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ !
|| ajio shopping kannda ||
Yashaswini Kannada volgs